Home emeputa Mejupụtara RC Gliders Aurora TT site na Composite RC Gliders - Nyocha vidiyo / Nyocha na 4K
Video gara aga Onodu nkewa nke oku - okwu nkuzi ndi na-efe efe
Video nke ozo PZL-106 AR KRUK GEHLING FLUGTECHNIK GMBH AGRICULTURAL AIRCRAFT Flight ILA BERLIN AIR SHOW
AKPỌ dị ukwuu!
Aurora TT bụ ihe ọhụrụ na-ekpo ọkụ site na Composite RC Gliders.
Maka onye ọkwọ ụgbọ ala F3K nwere ahụmahụ, enwere ike iru ihe karịrị 60-70 m mfe, mana maka m ka m na-akpachapụghị anya maka nyocha ule ka na-akpachapụ anya. Mana site na mbido ọ bụla ọ na - aga ntakịrị braver na elu.
Aurora TT dabara adaba maka iji asọmpi F3K dị elu, yabụ nkwupụta nke enyi na F3K freak maara nke ọma ;-).
Ejirila nkọwa ndị ahụ maka iji ụbọchị ọ bụla mee ihe site na nkwụsi ike ma nwekwa ike karịa (+ 15 gr) maka ịkwụsi ike maka iji ụgbọelu eme ihe ike kwa ụbọchị!
Performancegbọ elu a bụ kwantum itu ukwu ma budata ụba ma e jiri ya tụnyere ụdị F3K zuru ezu ama ama na nke a nwere ike imewe (+ 15 gr.) Ọ nọ n'ọkwa dị elu nke klaasị ụwa na-ezukọ.
Mbelata nke naanị 248 gram n'ihe metụtara profaịlụ dị ezigbo mkpa nke nku nke ejiri akwa CFRP gbasaa gbasaa gbadoro nnukwu ụfụfụ na-enyere obere afụ ọnụ na obere uko ka a nabata ya ma nwee ọmarịcha arụmọrụ dị oke mma na ọsọ ọsọ maka oge.
Nnụnụ ahụ kwụsiri ike na ngwa ngwa ma nwee ike ịme ngwa ngwa ka ọ ga-esi ike.
PROFI TX 16 Master Edition sitere na MULTIPLEX Modellsport akụkọ nyocha vidiyo
Onye na-enweghị Vario na ọtụtụ frills,
chọrọ crank thermals kpere na n'ụzọ dị irè,
mgbe ndị ọzọ ka nọ n’ala ma ọ bụ nọrọ,
Aurora TT mere ka ihu na-adịgide adịgide na ihu gị mgbe ọ gasịrị naanị ụgbọ elu ole na ole.
Nwee anụrị, enwetara m ya maka onwe m na F3K agaghị ahapụ m ọzọ.
Mgbe ị gara n'ihu ụbọchị atọ, ị ga-eji obere obi ike na mmetụta maka ntụgharị aka ziri ezi, ị nwere ike iru nrịgo elu nke ihe dị ka 50 mita. Ogologo a zuru oke maka ogologo ụgbọ elu mara mma, ọkachasị ebe ị nwere ike iwere thermals 5-10 mita n'elu ala na Aurora TT. Ọdịda na aka na-aghọ usoro. Stephan Eich gị
ANTI COLLISION LIGHT (ACL) site na EMCOTEC VIDEO TESTRIX AKW "KWỌ AKW "KWỌ AKW &KWỌ AKW CONKWỌ & NKWUKWU "Nkwupụta RC GLIDER
Tags 4Kaurora ttCompositeọtụtụ rc glidersF3Kụgbọ elu ikuku na-achịkwaMessenModelingModel na-efe efeFlightgbọ elu ụgbọ eluụgbọ elu igweOnyeka OnwenuRCụgbọ elu rcrl glidersrc nlereanyareviewNyochareviewsOnye na-ahụ maka ọkụ ọkụihe